Mpanamboatra rano Chiller - Mpamatsy sy orinasa mpamokatra rano China
Chiller rano anaty kaontenera
Niorina tamin'ny taona 2000, traikefa 20 taona mahery tamin'ny famokarana chiller rano. Ny chiller rano anay dia ampahany amin'ny rafitra fanamafisam-peo vita amin'ny beton izay azo ampiharina amin'ny fepetra miasa mafy mba hamokarana rano mangatsiaka hampiasain'ny indostrialy.
Ny maodelin'ny famaritana ny vokatra dia feno mba hanatanterahana ireo sehatr'asa fangatahana deferent.
Famolavolana maotina, miantoka ny chiller rano miasa amin'ny fomba mahomby sy mampihena ny fanjifana angovo.
Shell sy Tube Tube Chiller
Shell sy Tube Type Water Chiller dia tsara indrindra amin'ny fampitaovana indostrialy sy ny rivotra ivoho. Ny vokatray dia mampiasa evaporator akorandriaka sy fantsona tondra-drano ary fantsona fifanakalozana hafanana avo lenta, manolotra fifanakalozana hafanana avo sy fahazoan-dàlana mora foana. Shell sy Tube Type Chiller rano dia be mpampiasa amin'ny rafitra fampangatsiahana amoniaka sy ny rafitra fampangatsiahana Freon.
Fandefasana horonantsary Type Water Chiller
Ny chiller rano karazana sarimihetsika mianjera dia mampiasa takelaka lamba manidina izay afaka manome fahombiazan'ny hafanana avo lenta ary mamokatra rano ranomandry akaikin'ny 0℃. Mandritra izany fotoana izany dia misy toerana malalaka eo amin'ny sisin'ny rano etona mba hiadiana amin'ny hatsiaka.
Fahafahana mitazona: 2374kCal-284,820kCal